Kasaqistaan oo argagixiso weerar ku qaaday iyo gurmad lala gaadhay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Kasaqistaan oo argagixiso weerar ku qaaday iyo gurmad lala gaadhay
Wadankaasi aadka u blaadhan ee Kasiqistaan ayaa shalay iyo daraad argagixiso is urursatey weerar u qaaeen dhismayaasha dawlada casimadii hore ee Almaty iyo magaalooyinka kale ee dalka. Waxa bililiqo xun loo gaystey caasimadii hore.
Waxa loo daatey bangiyada iyo meelo muhiim ahaa ayadoo lala baxay hub iyo rasaas iyo xitaa direyska ciidamada amniga. ”Waxa muuqata in waxa dhacaaya aanu ahayn dad cabasho qaba laakiin ay yihiin argagixiso is aruursatey oo raba inay fuliyaan inqilaab ayuu yiri Xuseen Warsame.
Dawlada ayaa dhawaan aqbashay cabashada laga qabay qiimaha gaaska oo dawladu joojisay inay qiimo dhimista ku sii hayso si loo helo dakhli ama faaiido laga sameeyo. Gaaska ayaa lagu isticmaalaa gawaadhida dalkaasi. Waxase aad moodaa inayna u jeedin oo ay rabeen inay dalka la wareegaan.
Waxa la arkay askar booliisa oo qoorta laga jaray taas oo cadaynaysa in falkaasi ayna ku shaqo lahayn dad cabasho qaba. Kasiqistaan oo ka tirsan xulafada Ruushka ayaa dalbatey in la soo gaaro, waxana saakadii hore ee maanta lala gaadhay gurmad ciidan.
Kasiqistaan ayaa waxa ku nool ummado is biirsaday oo ay ku jiraan ugu yaraan 4 milyan oo Ruusha oo aan iyagu ku jirin banaanbaxyada iyo rabshadaha dhacaya.
Waxa hadda socda in si degdega looga saaro caasimadii hore iyo magaalooyinka kale kooxahan argagixisada ah. Ciidamada gurmadka ayaa waxa ku jira xulafada u dhiganta tan Naato oo ay ku jiraan Tajikistaan, Kirgistaan, Armiiniya iyo Beelaruush.